BBC Somali - Ganacsi - Ganacsatada Iran ee Dubai oo ay saamaysay cunaqabatayn
Ganacsatada Iran ee Dubai oo ay saamaysay cunaqabatayn
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Agoosto, 2012, 11:11 GMT 14:11 SGA
Ganacsatada reer Iran iyo saamaynta cunaqabataynta Iran
Iran ayaa ganacsi dhow la leh dalalka carabta gaar ahaan Dubai oo ay ku nool yihiin ganacsato badan oo reer iran ah. Qiyaasha qaar ayaa sheegaya in ganacsiga ay Dubai la leedhahay Iran inuu yahay toddobo boqolkiiba. Laakiin hadda Iran waxaa saaran cunaqabatayn uu Maraykanka iyo Midowga Yurub ay ku soo rogeen, saamayn aad u wayn ayay ku yeelatay ganacsatada reer Iran ee ku nool Dubai.
Wariyaha BBC Simon Atkinson ayaa warbixintan ka soo diray.
Malaysia: Raadinta diyaaradda oo adkaatay
Kenya: Qaxooti lagu celiyay xeryaha04:36
Xildhibaan Yusuf Xasan oo kahadlay howlgalka Islii04:40
Mr Kay oo kahadlay xaaladda Soomaaliya03:56
Wareysiga Madaxweynaha Khaatumo05:23
Wareysiga Madaxweynaha Khaatumo05:21
Faarax Macalim oo ciidamo argagixiso ladagaalan ah su'aalo weydiiyeen 05:18
Arday Soomaali ah oo warqado u qoray qaxootiga Suuriya02:51